Izindiza Ezixakile zeF-117 Nighthawk Stealth Fighter
Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » Izindiza Ezixakile zeF-117 Nighthawk Stealth Fighter
zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Ezokuvakasha • Izimfihlo Zokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
I-F-117 Nighthawk Stealth Fighter
Yize indiza i-F-117 Nighthawk Stealth Fighter ithathelwe indawo ngokusemthethweni yi-F-22 Raptor jet, kubonakala isasebenza, ifihliwe njengemicibisholo yesikebhe. Eqinisweni, umlando we-Nighthawk awunamfihlo.
Ukudalwa kweNighthawk kwenziwa ngasese ekuqaleni kuka-1975.
Yaqala ukundizelwa ngonyaka we-1981, kepha yayigutshuzelwe ngasese, futhi umphakathi wawungazi ngale ndiza kuze kube yiminyaka engu-7 kamuva.
Ngemuva kokumenyezelwa kokuthatha umhlalaphansi njengoba ibisithathelwa indawo yiRaptor, kubonakala sengathi indiza ibigcinwe ngesikhathi esifanayo ingasebenzi nhlobo.
I-Nighthawk ekuqaleni yathuthukiswa njengezindiza zokuhlasela nguLokheed Martin ngemuva kokusebenza kubuchwepheshe be-stealth. Ukwakhiwa komanduleli wayo, indiza yokubonisa izivivinyo ebizwa nge-Have Blue, kwenziwa ngasese kusuka ngo-1975.
Ngo-1978, i-F-117A yaqala ukuthuthuka futhi yaqala ukundiziswa ngo-1981. Kodwa umphakathi wawungazi ngobukhona bayo yaze yamenyezelwa ngokusemthethweni eminyakeni engu-7 kamuva ngo-1988.
Phakathi konyaka we-1982 nowe-1988, i-Nighthawk yokuqala yathunyelwa njengebhanoyi lokuqala elisebenza ngokuzimela e-United States Air Force (USAF). Kungaba ngenye yezindiza ezingama-59 ezithutha i-USAF eyayizoyithola ngo-1990, imaka okokugcina ukulethwa.
I-United States Air Force ingene esikhundleni se-F-117 nge Umdwebi we-F-22 ngaphambi kokuba uhlelo lwe-F-22 lukhanselwe ngo-2009. Luthathelwe indawo nge-F-35 Joint Strike Fighter eshibhile futhi esebenza ngezindlela eziningi. Izindiza zokuqala eziyishumi kwezingu-55 ze-F-117 ezazisebenza zazithathe umhlalaphansi ngoDisemba 2006. Umcimbi osemthethweni wokuthatha umhlalaphansi wenziwa eWight-Patterson Air Force Base ngoMashi 2008.
Kepha amaNighthawks awasekho. Zigcinwa kuma-hangars esikhumulweni sezindiza kuTonopah Test Range eNevada. Ama-Nighthawks wokugcina ama-4 afika kuTest Range ngo-Ephreli 22, 2008. Izimpiko nemisila zisusiwe ukuze zigcinwe, kepha ezinye izindiza zingakhunjulwa ngokushesha ukubaleka uma kudingeka.
Muva nje, abakwa-Air National Guard baqinisekisile ukuthi i-F-117 Nighthawks iyasetshenziswa ekuzivocavoca umzimba, kufaka phakathi ukusebenza njengabamele abasebenza ngemicibisholo engenayo. Ubufakazi bukhombisa ukuthi lo mkhuba wokuziqeqesha ubusunesikhathi eside kwenzeka. Ngoba indiza ingalingisa izenzo ezinjengemicibisholo ye-cruise, iyisiteji esifanelekile sokuzivocavoca ngemishini yokuvikela imishini yokulwa ngomkhumbi.
I-Nighthawk mhlawumbe yathola igama layo ngoba isetshenziselwa ukuhambela isikhathi sasebusuku kuphela. Futhi ekusithekeni, ngokungangabazeki, kunikezwe umlando wayo ngisho nombala wayo omnyama, okwenza kube lula ukuhlangana nesibhakabhaka sasebusuku. Kepha ngubani odinga ukuhlangana lapho ungabonakali ku-radar?
Ubuso namaphrofayli onqenqemeni eNighthawk enzelwe ukukhombisa i-radar enobutha ibe yizimpawu zesigaxa esincane, esiqondiswe kude nomtshina we-radar yesitha. Yonke iminyango namapaneli okuvula endizeni aneziphetho ezibheke phambili nezilandelayo ezibonisa i-radar. Ingaphezulu lendiza ligcotshwe ngezinto zokumunca i-radar (RAM). Konke lokhu kwenza kungabonakali.
Eyaziwa nangokuthi i-Frisbee ne-Wobblin 'Goblin, inhloso ye-F-117A Nighthawk ukungena ezindaweni ezinobungozi obukhulu futhi ihlasele imigomo yenani eliphezulu ngokunemba okuphezulu. INighthawk ibisemsebenzini wokusebenza ePanama, ngesikhathi se-Operation Desert Storm, eKosovo, e-Afghanistan, nangesikhathi se-Operation Iraqi Freedom.
Izindiza ezihamba kancane zakhiwe nge-aluminium ene-titanium yezindawo zenjini nezinhlelo zokukhipha.